Dacwad 2004kii dhacday oo maanta dib loogu noqon doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwad 2004kii dhacday oo maanta dib loogu noqon doono
La cusbooneeyay tisdag 16 maj kl 11.13
La daabacay tisdag 16 maj kl 10.26
Kaj Linna. Waxaan rajeeyn in xorriyaddeeydii la ii soo celiyo
Maxkamadda rafcaanka ee magaalada Umeå. sawir: Izabelle Nordfjell/ T
Maxkamadda rafcaanka ee magaalada Umeå ayaa maanta dib ugu laaban doonta maxkamad dacwad la xiriirtay dacwad lagu magacaabo Kalmarmordet, middaasina oo horay xabsi daa’in loogu xukumey nin lagu magacaabo Kaj Linna, hase yeeshee ogolaansho ka helay maxkamadda sare.
– Waxaan filayaa in xabsiga la iga sii daayo. Laakiin maaha mid la hubo boqolkiiba boqol, maadama ay yihiin bakhtiyaa nasiib howlaha maxkamaduhu, sida uu sheegay mar uu wareeysi siiyay laanta P4 Norrbotten.
Kaj Linna ayay maxkamadda rafcaanka ee waqooyiga Sweden ku xukuntay xabsi daa’in sannadkii 2005. Isagoo mar kale maxkamadda rafcaanka lagu qaadi doono dacwaddiisa mar kale kolkii la ogolaaday in dib u eegis lagu sameeyo.
Falka dilka ee Kalamarksmordet ayaa dhacay sannadkii 2004, halkaasina oo xero lo’aad lagu dilay nin lagu magacaabi jiray Roger Lindberg, walaalkiis Sune-na jir-dil loogu geeystay sariirtiisa. Kaj Linna ayuu xukun ku dhacay iyada oo aan loo heyn wax caddeeyn tekniko ah, iyada oo xukunkaasina laga bixiyay doodo badan oo wax la iska weeydiiyey.
Dacwadda ayaa lagu qaadi doonaa magaalada Umeå iyada oo xiisaha saxaafaddu u heeysaana tahay mid aad u ballaaran. Waana mid saameeyn ku yeelatay Kaj Linna.
– Xoogaa waxay noqon dareen laba kacleeyn, haddii sidaa la oran karo. Waa middaa iyada ah, midda haddii uu welwel jiro, hase yeeshee mar un ayuu welwelkaasi i sii deeyn doonaa.
Xeer-ilaaliyaha dacwaddan ayaa mar kale doonaya inuu caddeeyo inuu Linna ahaa ciddii dhaca dilka ah ugu geeysatay nin magaalada Kalamark sannadkii 2004, isla-markaana dhaawacay marxuumka walaalkii.
Dacwadda oo saaka bilaabatay ayuu xeer-ilaaliye Jens Göransson ku bilaabay inuu ka sheego in falkaasi ahaa mid dhac salka ku hayay ee loo geeystay walaalaha Kalamark ku dhaqnaa. Isgoona guda galay inuu soo ban-dhigo caddeeymaha.
Xeer-ilaaliyaha ayaa taageer-san markhaatigii dacwaddaasi 2005, waana mid looga fadhiyo inuu caddeeyo in la aamini karo ereyadii markhaatiga dacwadda.
Sida uu horay markhaatigu u sheegay inuu ka maqlay Kaj Linna inuu ku tala jiro inuu dhac u geeysto walaalaha Kalamark, maalin ka hor intii aannu fal-dembiyeedkaasi dhicin. Sidoo kale wuxuu markhaatigu sheegay inuu gaari ku qaaday Kaj Linna oo uu safar la galey si uu uga tala baxo qorshahaasi.
Xeer-ilaaliyaha ayaa ku talo-jira inuu soo ban-dhigo xiriirkii ka dhexeeyey Kaj Linna iyo markhaatiga bishii iyo malmihii uu fal-dembiyeedku dhacay.